ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဖြန့်ချိသည့် Google ၏ multiplayer ဂိမ်းကိုကစားပါ Androidsis
Google ကငါတို့ကိုထုတ်ခွင့်ပေးတယ် ဟယ်လိုဝင်းပွဲအတွက်မင်းကစားနည်းအတွက်ကောင်းသောဂိမ်းအချို့။ အားလုံးရိုးရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တန့်စေရန်အလုံအလောက်ဒြပ်စင်များကိုထည့်သည်။ အဘယ်သူမျှမ, ငါတို့သည်သင်တို့တစ်မိနစ်မှာသင်ပျင်းနေသောသင်တို့၏ရိုးရှင်းသောနှင့်ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းရင်ဆိုင်နေရကြသည်မဟုတ်, အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့ရယ်မောရယ်စရာနှင့်အတူအားလုံး multiplayer ထက်ဖြစ်ကြသည်။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းများမှ Android မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် iPhone ကဲ့သို့သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိသည့်ဟယ်လိုဝင်းညဖြစ်သည်။ ဒီကစားနည်းကိုပျော်မွေ့နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိလို့ငါတို့ပြောတာ မည်သည့်ကိရိယာမှပျော်ရွှင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်သင်၏မိုဘိုင်းမှပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မှတိုက်တွန်းပါသည်။
1 ဒါပေမယ့် Google's Halloween ဂိမ်းကဘာလဲ။
3 ဂူဂဲလ် Multiplayer ဂိမ်းကစားနည်း
ဒါပေမယ့် Google's Halloween ဂိမ်းကဘာလဲ။
ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဂူဂဲလ်ဂိမ်းကိုဘယ်လိုကစားရမယ်ဆိုတာငါတို့မပြောခင်သွားကြစို့ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြဖို့ နှင့်သင်၏မစ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ကောင်းကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုရန်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ရန်သွားမည်။ စကားမစပ်များစွာသောရှိပါတယ်။
ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဂူဂဲလ်ဂိမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုကစားစရာတွေအများကြီးကစားပေးတယ် သူတို့အားသရဲတစ္ဆေများစုဆောင်းသွားပါ သေးသေးသေးမဟုတ်ပေမယ့်သင့်တော်သောအရွယ်အစားကိုမြေပုံပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဂူဂဲလ်ဂိမ်း၏အဓိကဂိမ်းစက်ရုပ်သည်ထိုသရဲများကိုစုဆောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အခြေသို့ယူသွားသည်။
သူတို့ကိုငါတို့အခြေစိုက်စခန်းမှာထားခဲ့ရင်ငါတို့စုဆောင်းခဲ့တဲ့သရဲတွေရဲ့အရေအတွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေထပ်ပေါင်းထည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံးရမှတ်ရရန်လိုအပ်သည် ဆန့်ကျင်အသင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်ရန်အတွက် ငါတို့ရှုံးနိမ့်သွားပြီးအားလုံးအောင်မြင်နိုင်အောင်သူလည်းသူ့အမှုကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူခိုးသရဲကိုထိန်းချုပ်ရန်ထိန်းချုပ်သည့်ချောင်းရှိသည်။ ပျော်မွေ့ရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအပြန်အလှန်။
ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဂူဂဲလ်၏ multiplayer ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကဆန့်ကျင်အသင်းမှကစားသမားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့တွင်စွမ်းရည်ရှိလိမ့်မည်။ သရဲတို့ကိုလည်းပယ်ရှားကြလော့ သူတို့စုဆောင်းပါပြီ။ တနည်းအားဖြင့်ငါတို့စုဆောင်းမိသောတစ္ဆေများသည်အလွန်ကျွမ်းကျင်သောဆန့်ကျင်သူကစားသမားအားကျွန်ုပ်တို့ကိုကျော်တက်ပြီးသူ၏ "အိမ်" သို့အလျင်အမြန်ခေါ်ဆောင်သွားရန်သရဲတစ္ဆေအားလုံးအားဖယ်ရှားပစ်ရန်တန်းစီနေသည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဂူဂဲလ်ဂိမ်းကကမ်းလှမ်းခဲ့သောမူတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်ကြသည်။ မိမိကိုယ်ကိုခိုးယူရန်၊ မတူကွဲပြားသောအိမ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်သူတို့၏တစ္ဆေသရဲများမှာအလွန်ရှည်လျားသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါင်းအဖော်များကိုခုခံကာကွယ်ရန်ကြိုးစားရမည်။ ဒီတော့ငါတို့မှာနည်းဗျူဟာတစ်ခုလုံးရှိတယ် အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ multiplayer ဂိမ်း ဒါကတကယ်ကိုအံ့အားသင့်စရာပါ။
ပြီးတော့ဂူဂဲလ်ဂိမ်း (သို့မဟုတ်ပါ) ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းကိုတန်ဖိုးထားသည်။ лагမပါဘဲperfectlyုံလုပ်ဆောင်တယ် ၎င်းသည်ဟယ်လိုဝင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပုံသဏ္visualာန်ရှိသည်။ ရုံကြောက်စရာညအဘို့ဤကြောက်စရာဂိမ်းစီးရီးလိုပဲ။ ၎င်းသည် multiplayer ပေါ့ပါးသည့်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ ၎င်းသည် developer များက၎င်းကိုအလွန်အလေးအနက်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာကစားသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာသည်။
ဂူဂဲလ် Multiplayer ဂိမ်းကစားနည်း
သွားကြရအောင် Google က.
ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် နှစ်ခုဆန့်ကျင်သရဲတစ္ဆေနှင့်အတူ doodle တစ် ဦး ခရမ်းရောင်ကစား button ကိုအတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
သင်ကမှကစားနိုင်ကြောင်းသတိရပါ မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆို Android, သင့် PC သို့မဟုတ် iPad လို mobile ။
၎င်းကိုစတင်ရန်ဂူဂဲလ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်သည့် web browser တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။ ပျော်စရာင ကြီးမားသော, G နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ multiplayer ဂိမ်း ကြောက်မက်ဖွယ်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဤကာလများ၌သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျေးဇူးပြုလိုခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်လှည့်လည်လိမ့်မည်သမျှသောဤဖုတ်ကောင်အဖြစ် အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာသင့်ရဲ့မိုဘိုင်း၏။ chicha ပိုများချင်ရင်တစ်ခုခုကိုလိုချင်ရင်၊ PUBG မိုဘိုင်းအတွက်ဟယ်လိုဝင်း update ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဂူဂဲလ်ရဲ့ Multiplayer Game ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ